Tsvaga maThistile Tours Odisha | Nokuda Kwakawanda Tumira pa: + 91-993.702.7574
Iwe uri mumwe munhu anofara nekuona michina yakaoma kana shoko rokuti Textile rinoratidzika kwauri? Zvino iwe wakasvika panzvimbo yakarurama. Dombo reMatombo 'Textile Tours Odisha inokupa nzira dzakasiyana-siyana dzekuongorora Odisha yakasiyana-siyana yepasi. India ndeimwe yenyika inodhura zvikuru maererano nekukwikwidzana kwemakwikwi ezvinhu. Odisha ane chinyorwa chekare chemuchengetedzi wemagetsi. Majeko eAdisha akawana mukurumbira wenyika yose uye mukurumbira wekugadzirwa uye unhu. Mhando dzakasiyana dzakagadzirwa muOdisha dzakadai saSambalpuri, Bomkei uye Berhampuri. Odisha ichinyanya kuzivikanwa neIkat iyo yekunyora. Iwe unogona kuzvirumbidza mune izvi nekubatsirwa kweTechtile kutarisa Odisha. Zvishandiso ndezvemagariro ezvinyorwa zvinoratidzira nhoroondo dzevanhu munharaunda dzavanotangira. Zvishandiso muIndia zvinowanzosiyana kubva munzvimbo kuenda kune zvinoshamisa, kwete chete maererano nemhando yezvinhu kana shati asiwo mukugadzirwa, kuratidzira mukati mavo kusiyana kwezvakasiyana-siyana uye tsika dzemadzinza. Dombo reMatombo 'Matwendo eThisita Odisha ichaita kuti uve nechiitiko chakanaka chemastile artefacts uye zvipfeko.
Our Odisha Textile Tour Packages zvakanakisisa kuti vanhu vakapfeka nguo uye zvipfeko vanofarira uye vanoda kutsvaga mishonga yehuta yeOudisha. Ndiyo chirongwa chekushanyira 14-day uye inobatanidza Bhubaneswar, Nuapatna, uye Maniabandha inozivikanwa neOlasingh Textile Village, Chikiti Textile Village, Sambalpuri Textile Villages dzakapoteredza Sagarpalli neButtupalli, Barapalli Textile Village, Attabira Textile Village, Sericulture Projects, uye Tussar Silk Village. Iwe haufaniri kumirira kuti uone ichi chakaisvonaka che Odisha Textile Travel. Isai zvikwama zvenyu pakarepo, uye siyai zvimwe zororo kwatiri.
Mutengo: 51198 | Mutambo Wokushanyira: 009
ZUVA 01: ARRIVAL
Kokana & sokwazisa paunosvika kuBhubaneswar Airport / Railway Station uye uzoendesa kune hotera yakatangwa. Kana nguva ichibvumira, kushanyira ma tempile ekare e07th Century AD kusvika 12th Century AD. Overnight at Bhubaneswar.
ZUVA 02: BHUBANESWAR - DHENKANAL
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kuenda kuDhenkanal en-route kushanyira Nuapatna (IKAT Kuisa musha) uye Sadeibarini (Dhokra Casting Village). Usiku huno paDhenkanal.
ZUVA 03: DHENKANAL - SAMBALPUR
Mushure mekudya kwekudya kwemazuva ekumhanya kuenda kuSambalpur.Africa mushure mokushanyira kune imwe nzvimbo yekugadzira musha. Usiku huno paSambalpur.
ZUVA 04: SAMBALPUR - BARGARH - BARPALI - BALANGIR
Mushure mokunge kudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaBalangir kuburikidza naBargarh Kuisa Masvingo uye Barpali Silk Kuisa Masvingo (vanhu vomumusha weBarpali ndivo vanogadzira mhizha dzeTussar Silk). Usiku huno kuBalangir.
ZUVA 05: BALANGIR - SONEPUR - BALANGIR
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaSonepur Weaving Village Usiku huno kuBalangir.
ZUVA 06: BALANGIR - GOPALPUR (GANJAM)
Mushure mekudya kwekudya kwemafambisi kuenda kuGopalpur nePadmanavpur Weaving Village. Usiku huno paGopalpur.
ZUVA 07: DEPARTURE
Mushure mokufambisa kwekudya kwemangwanani kudzokera kuBerhampur Railway Station / Bhubaneswar Airport kuitira kuenda mberi.